Fanodinkodinam-bolam-panjakana : Voasazy dimy taona an-tranomaizina i Nivo Ratiarison -
AccueilRaharaham-pirenenaFanodinkodinam-bolam-panjakana : Voasazy dimy taona an-tranomaizina i Nivo Ratiarison
Voaporofo fa tsy mpitahiry mpanao ratsy ny fanjakana, toa izao nahazo an’i Nivo Ratiarison izao izay talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Serasera omaly. Taorian’ny fitarainana izay nataona olon-tsotra teny amin’ny Bianco na ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly dia nipetraka ho mpitory ihany koa ny fanjakana malagasy. Na dia nanda mafy ny fiampangana azy aza ireo voampanga roa voalohany amin’ity raharaha ity dia ny tale kabinetran’ny minisiteran’ny Serasera teo aloha sy ny tompon’andraikitra ara-barotra eo anivon’ny ORTM dia nipetraka hatrany ny fahaleovantenan’ny fitsarana. Telo tamin’ireo fiampangana dimy no vesatra nitazonana an’i Nivo Ratiarison sy ilay tompon’andraikitra ara-barotra niray petsapetsa taminy, hosoka sy fampiasana hosoka, fanodinkodinana fananam-bahoaka, fananan-karena tsy ara-drariny. Ankoatra io sazy io ny fandoavana lamandy 80 tapitrisa Ariary. Tsy fahazoana manao ny asa-panjakana intsony kosa ho an’ilay tompon’andraikitra ara-barotra eo anivon’ny ORTM.
Vola mahatratra hatrany amin’ny 359 954 224 tapitrisa Ariary no voahodina nandritra ity raharaha ity. Nisy ny vola nalaina tsikelikely ary nisy ny nalaina mivaingana. Taratasim-bola roa samy hafa mitentina 24 960 000 tapitisa Ariary no voalohany ary 3 535 411 tapitrisa Ariary no faharoa, vola izay avy amin’ny banky roa samy hafa. Vidina dokam-barotra avy amin’ny tambazotran-tserasera ireo ary izay no niandohan’ny raharaha. Nampisafotofoto tao anatin’ity raharaha ity ny fisiana orinasa iray tsy miankina, mividy toerana ahafahana mamokatra fandaharana ao amin’ny haino aman-jerim-pirenena. “Genie media’’ no anaran’io orinasa io ary mamokatra fandaharana ao amin’ny televizionina malagasy. Mpiahy io orinasa io ny talen’ny kabinetra raha ny fanazavana, ka izay no nataony fitaovana. Ilay orinasa rahateo zay nanome fahefana azy haka vola noho ny tsy fananana kaonty any amin’ny banky. Nony tonga ny taratasim-bola voalaza etsy ambony ireo zay misoratra amin’ny TVM, dia notakosenana ny anaran’ny fandaharana ‘‘Mazava Atsinanana’’ary nalain’izy ireo ny vola.
Niara-dalana tamin’ity raharaha ity ny fakana entana tany amina orinasa iray, voalaza fa hanamboarana trano hanodinana fandaharana ao amin’ny TVM Anosy ihany. Mbola nampiasain’ny talen’ny kabinetra sy ilay tompon’andraikitra ara-barotra hatrany ny anaran’ilay orinasa mividy toerana ao amin’ny TVM nandritra ny fifanarahana. Ireo entana ireo zay mitentina 60 tapitrisa Ariary ny tentim-bidiny. Raha ny fanazavana azo nandritra ny fitsarana androany dia nisy ny fizarazarana ireo entana ireo, ary ny ampahany betsaka dia tsy hita popoka. Tsy nipoitra mihitsy ihany koa ny lisitr’ireo fitaovana ireo na dia efa notakiana aza. Ankoatra ny tale kabinetran’ny minisiteran’ny Serasera teo aloha sy ilay tompon’andraikitra ara-barotra dia anisan’ny voampanga nanatrika fitsarana ihany koa ny talen’ilay orinasa nividy toerana hamokarana fandaharana, sy ny tale jeneralin’ ny ORTM ary ilay irakiraka. Ireto farany izay nahazo fahafahana nandritra ity raharaha ity .